तिन करोड नेपालीको जित ! गरिब दुखिको भगवान रबि लामिछानेले पाए न्याय ! सफाई पाए लगतै यस्तो भने- News20 Media
January 19, 2020 N20LeaveaComment on तिन करोड नेपालीको जित ! गरिब दुखिको भगवान रबि लामिछानेले पाए न्याय ! सफाई पाए लगतै यस्तो भने-
काठमाडौं-आ’त्मह’त्या दु’रुत्साहन मु’द्दामा रवि लामिछानेसहित तीनै जनाले स’फाइ पाएका छन्। चितवन जिल्ला अदालतले आइतबार (माघ ५)मा आ’त्महत्यादु’रुत्साहन गरेको क’सुरमा उनीहरु नि’र्दाेष रहेको भन्दै स’फाइ दिएको हो। सफाई पाए लगतै संचारकर्मी सँग कुरा गर्दै सबै प्रति भारर प्रकट गरेका छन ।यस अघि रबि लामिछाने रा युबराज कडेलध’रौटी बझाएर थु’नामुक्त भएका थिए । पत्रकार शा’लिक’राम पु’डासैनीको र’हस्यमय नि’धन सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि ११ दिन प्रहरीको न्या’यिक हि’रासत बसेर गत भदौ ९ गते रि’हा भएका थिए ।
अस्मिता भने साधारण तारेखमा रि’हा भएकी थिइन् ।अ’भियोग पत्रमा उनीहरुवि’रुद्ध ५ वर्ष जे’ल स’जाय र ५० हजार ज’रिवानाको मा’ग गरिएको थियो । रि’हा भए पनि जिल्ला अदालतले विदेश जान अ’नुमति लिनुपर्ने, शा’लि’क’राम पु’डा’सैनी आ’त्मह’त्याबारे कार्यक्रममा छ’लफल तथा ब’हस च’लाउन नपाउने र अदालतमा वि’चाराधीन विषयमा बो’ल्न नपाउने भन्दै ब’न्देज लगाएको थियो। उच्चले पनि जिल्लाकै आ’देश स’दर गरेको थियो।